“LACAGTA SHILIN SOMALILAND KUMA QAADANNO.”!!! QALINKA MAWLIID CALI-DHURE | Hangool News
“LACAGTA SHILIN SOMALILAND KUMA QAADANNO.”!!! QALINKA MAWLIID CALI-DHURE
Haddiiba uu mar labaad igu soo dhacay ayaan telefoonka eegay mise waaba mid ka mid ah ehelkayga oo aanan hore uga baran in xilligan aanu telefoon ka wada hadalno, wax hawl ahna aanan isku ogayn. Su’aalo badan ayaa isla ilbidhiqsi maskaxda ku soo dhacay, ugu dambeyna intaan bisinka u qabtay oo aan idhi “Allow Khayr ka yeel,” ayaan telefoonkii qabtay.
Wakhti iguma qaadan inaan Lacag Zaad ah u dira oo waaba ilbidiqsiyo intaan dirayay, balse waxaa maskaxdayda ka sii guuxayay, Dhakhtar Hargeysa ku yaalla oo diiday inuu lacagta Somaliland qaato. haddiiba uu sharci ka dhigtay inuu lacag doolar ah qaato, waxaa iga sii yaabiyay arxan darrada arrintan ka muuqata oo ah in qof bukaan ah oo xilli habeennimo socda oon lahayn lacagta badh iga daa ama way iga dhiman tahay daruuri lagaga dhigo inuu lacag doolar ah bixiyo, islamarkaana qofka xilligaasi muddo kuyuuga ku jiray ay suuro gal tahay inuu meel dheer uga soo guuro galay, sidoo kale meherad furan oo lacag sarriftaa aanay jirin, ku darso oo xilligaas habeenka ah aanay dad badan suuro gal u ahayn inay telefoon ku helaan lacag sidaas u degdeg badan, haddana lacag qabtuhu aanu xisaabta ku darsan duruufahaas suuro galka ah.
Inay lacagta Doolarka ahi ka sharaf badatay lacagta Somaliland waa mid la wada dareensan yahay gudaha Somaliland. Dadaallo badan oo xukumaddu samaysay, kuna talisay in dadku wax ku iibiyaan, adeegyada lagu qabto lacagta Somaliland, islamarkaana la dhiiri galiyo Shilinku ilaa hadda waa kuwo noqday hal bacaad lagu lisay oo aan cidna ka dabatagin. hase ahaatee in diirka naxa iyo damiirku bulshada shaqeeyo oo wakhtiyada ay ka fursan waydo dadka loo sameeyo fursado qofka lacagta kaashka ah lagaga qaban karo ayaa munaasib ah ama habboon. Dadka waxaa kala hagta dawladda, balse haddii la isku sii daayo cid waliba wixii danteeda ah ayay maroorsanaysaa.